Ukuchithwa kwe-Sodium Bicarbonate Formula
Ukulingana kweNkunkuma yeSodium Bicarbonate (i-Baking Soda)
Ukulingana okulinganayo ngokuBhaka i-Soda Reaction
Ukusabela kokunciphisa i-sodium bicarbonate okanye i-baking soda yindlela ebalulekileyo yokwenza amakhemikhali ngenxa yokubhaka ngenxa yokunceda ukukhupha impahla. Kwakhona indlela onokuyenza ngayo i-sodium carbonate , enye ikhemikhali eluncedo, ebizwa ngokuba yi-washing soda.
I-Equation for the Decomposition of Sodium Bicarbonate
Ukulingana okulinganiselayo ukuchithwa kwe-sodium bicarbonate kwi-sodium carbonate, i-carbon dioxide kunye namanzi kukuba:
Njengazo zininzi zempendulo zamakhemikhali, izinga lokuphendula lixhomekeke kubushushu. Xa kusomile, i-baking soda ayiyi kuhlamba ngokukhawuleza, nangona inokuphila kwirefri, ngoko ke kufuneka uyivivinye ngaphambi kokuba uyisebenzise njengesithako sokupheka okanye kwi-test.
Enye indlela yokukhawulezisa ukubola kwesithako esomileyo kukutshisa kwi-oven efudumele. I-baking soda iqala ukuhlamba i-soda, i-carbon dioxide kunye namanzi kwindawo yokushisa lokushisa xa ixutywe ngamanzi, kungenxa yoko akufanele ugcine isitya sibheka kwisitya esivaliweyo okanye ulinde ixesha elide phakathi kokuxuba iresiphi kwaye uyibeke ehovini . Njengoko iqondo lokushisa liye linyuka kwindawo yokubilisa yamanzi (i-100 Celcius), impendulo iya kugqitywa, ngokuchithwa kwayo yonke i-sodium bicarbonate.
I-sodium carbonate okanye i-soda yokuhlamba iphinda ihlaselwe, nangona le molekyu isisigxina se-sodium bicarbonate.
Ukulingana okulinganayo kwindlela yokuphendula ngayo:
Na 2 CO 3 (s) → Na 2 O (s) + CO 2 (g)
Ukuqhekeka kwe-sodium carbonate e-sodium e-oxide kunye ne-carbon dioxide kwenzeka ngokukhawuleza kwiqondo lokushisa kwamagumbi kwaye kuqhubeka ukugqitywa ngo-851 C (1124 K).
Inkcazo ye-Biology Prefix 'Eu-'
Iimali zeMali ze-19th Century
Isikhokelo sokuPenda kwi-Hardboard okanye kwiThuni
Ivesi zeBhayibhile kwi-Backsliding
I-Microsoft Access 2010 I-Tutorial Database: Yakha i-Database evela kwi-Scratch
UDui Bu Qi, esithi "Uxolo" ngesiMandarin IsiShayina
Uqoqosho lwezeMali waseMelika
Ukuthandana Okuphezulu kunye Nezobudlelwane Zobunxibelelwano Ngeencwadi Zentsha yamaKristu